January 2021 - MinSayYar
အရမ်းချီးကျုးစရာကောင်းပြီးသနားစရာကောင်းတဲ့သားလေးရယ်သတ္တိကောင်းတယ် မျက်ရည်မခိုင်ဘူးဗျ အရမ်းချီးကျုးစရာကောင်းပြီးသနားစရာကောင်းတဲ့သားလေးရယ်သတ္တိကောင်းတယ် မျက်ရည်မခိုင်ဘူးဗျာ သူရဲ့ခြေထောက်လေးကျိုးနေတာတောင် မုန့်လေးတစ်လုံးနဲ့နာကျင်မူကိုမေ့ထားနိုင်တဲ့သနားစရာသားလေးရယ် အမြန်ပြန်ကောင်းပြီးအနာရောဂါကင်းဝေးပါစေသားလေးရယ် သားလေးအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်မိတ်ဆွေများလဲပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါဗျာ သင့်အတွက်အပမ်းမကြီးပါဘူးဗျာ……. Unicode အရမ်းချီးကျုးစရာကောင်းပြီးသနားစရာကောင်းတဲ့သားလေးရယ်သတ္တိကောင်းတယ် မျက်ရည်မခိုင်ဘူးဗျ အရမ်းချီးကျုးစရာကောင်းပြီးသနားစရာကောင်းတဲ့သားလေးရယ်သတ္တိကောင်းတယ် မျက်ရည်မခိုင်ဘူးဗျာ သူရဲ့ခြေထောက်လေးကျိုးနေတာတောင် မုန့်လေးတစ်လုံးနဲ့နာကျင်မူကိုမေ့ထားနိုင်တဲ့သနားစရာသားလေးရယ် အမြန်ပြန်ကောင်းပြီးအနာရောဂါကင်းဝေးပါစေသားလေးရယ် သားလေးအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်မိတ်ဆွေများလဲပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါဗျာ သင့်အတွက်အပမ်းမကြီးပါဘူးဗျာ…….
31st January 2021 moderator
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် ဆိုင်ပိတ်ထားရတဲ့ fashion shop တော်တော်များများဟာ online shop အနေနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရောင်းချလာကြပါတယ်။ online shop ပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံတွေကိုပြပြီး ရောင်းချရပါတယ်။ အချို့သောဖက်ရှင်ဆိုင်များဟာ ပစ္စည်းတွေသာရှိပြီး ဓာတ်ပုံတွေမရှိတဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံတွေကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ရိုက်ပြီး ရောင်းချကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ဦးကတော့ အိပ်ရာပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ သူ့ယောကျ်ားကိုမြင်ပြီး အကြံဉာဏ်တစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူ့ယောကျ်ားကို photo model ပြုလုပ်ခိုင်းဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတဲ့အခါ သူမရဲ့ online shop ဖြစ်တဲ့ facebook page မှာ အင်္ကျီတွေကိုရောင်းချဖို့ ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ တော်တော်လေးကို နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီး မှတ်ချက်ပေးသူများနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေသူတွေလည်း အများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ သူမရဲ့ online shop မှာတင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို […]
cele LOCAL NEWS
(၁၉၉၉) ခုနှစ်က လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဆွမ်းစားကျောင်းဆောင်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်လှူဒါန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
တခေတ်တစ်ခါက အရမ်းကိုနာမည်ကျော် လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသမီးထက်ထက်မိုးဦးကတော့ သူ့ခေတ်သူ့အခါတုန်းက အလှူတွေအများကြီး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ ထက်ထက်တို့ခေတ်က ဖေ့ဘုတ်စ်တွေ ခေတ်မစားသေးတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေမသိပေမယ့် သူမ အနုပညာကြေးလေးတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ ထက်ထက်က သူမ ၁၉၉၉ ခုနစ်ကလှူခဲ့တဲ့ အလိုတော်ပြည့်ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်က အာဟာရသုခ ဆွမ်းစားကျောင်းဆောင်ကို လိုအပ်တာတချို့ ပြန်လည်ပြုပြင် လှူဒါန်းဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ စလှူခဲ့တုန်းကလည်း အလုပ်တွေလုပ်လိုက် လှူလိုက်နဲ့ပဲ ကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါမှာလည်း အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ပြန်လည်လှူဒါန်းခွင့်ရတာမို့ အရမ်းကိုမှ ပီတိဖြစ်ရတယ် သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ နာယကချုပ်ဆရာတော်ကလည်း “ကျောင်းဒါယိကာမကြီး ဘာမှ မပူနဲ့ ဒကာမကြီးရဲ့ ဆွမ်းစားကျောင်းဆောင်မှာ သံဃာတွေဟာ အမြဲတမ်းတစ်နေ့ ၂ ကြိမ် […]
ကယန်းလူမျိုး အမျိုးသမီးများ၏ ကြေးကွင်းစွပ် ဓလေ့
ကယန်းလူမျိုး အမျိုးသမီးများ၏ ကြေးကွင်းစွပ် ဓလေ့ ကယန်းလူမျိုးများသည် အခြားကြောင့် မဟုတ်လည်ပင်းတွင် ခွေစွပ်ထားသော အမျိုးသမီးများကြောင့် ကမ္ဘာကပင် စိတ်ဝင်စားကြသည်ကို လူတိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်လေသည်။ ကယန်း ဟူသောစကားသည် (ကမ်းယန့်) မှဆင်းသက် ပြောင်းလဲလာသော စကားဖြစ်သည်။ (ကမ်း) ဟူသော အဓိပ်ပါယျမှာ နယ်မြေဒေသ၊ နယ်ပယ်၊ ဧရိယာ သတ်မှတ်ထားသော မြေသား အကျယ်အဝန်း ဖြစ်၍ (ယန့်) ဆိုသည်မှာ စွဲစွဲမြဲမြဲရှိခြင်း၊ အတည်တကျ ရှိခြင်းဟုအဓိပ်ပါယ်ဆောင်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကယန်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “နယ်မြေဒေသ တစ်ခုအတွင်း အတည်တကျ နေသောသူများ” ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ကယန်းလူမျိုးများသည် ၎င်းတို့အား (ပဒေါင်) ဟု ခေါ်လျှင် နှစ်သက်လေ့ မရှိပေ။ ပဒေါင်ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းမှာ ကယန်း ဘာသာစကား မဟုတ်ဘဲ […]
မြတ်စွာဘုရား မိန့်တော်မူခဲ့သည့် သားသမီးသုံးမျိုး
မြတ်စွာဘုရား မိန့်တော်မူခဲ့သည့် သားသမီးသုံးမျိုး အတိဇာတံ အနုဇာတိ၊ ပုတ်တမိစ္ဆန်တိ ပဏ်ဏ္ဍိတာ။ အဝဇာတံ နဣစ္ဆန္တိ၊ ယောဟောတိကုလဂန္ဓနော။ မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူတယ်။ အတိဇာတ သားသမီးတစ်မျိုး၊ အနုဇာတ သားသမီးတစ်မျိုး၊ အဝဇာတ သားသမီးတစ်မျိုး ဆိုပြီး သုံးမျိုးဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ၁။ အတိဇာတသားသမီး မိဘများရဲ့ ကျေးဇူးတရားများကိုနားလည်သိရှိပြီး စွမ်းနိုင်တဲ့အခါမှာ ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တတ်၍ မိဘတို့ထက် အကျင့်သီလ အာစာရဂုဏ် လိမ်မာရေးခြားပြည့်စုံတဲ့ သားသမီးမျိုးကို အတိဇာတ သားသမီးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ သားသမီးမျိုးပင်ဖြစ်၏။ ထင်ရှားအောင် ပြောရရင် သာသနာတော်မှာ ရှင်ရဟန်း အဖြစ်ဖြင့် မိဘ၏ ကျေးဇူးတရားများကိုပေးဆပ်နေသော သားသမီးမျိုးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ရဟန်းဆိုတည်းက သီလအားဖြင့် မိဘတို့စောင့်ထိန်းနေသော ငါးပါးသီလ ရှစ်ပါးသီလထက်၊ ၂၂၇သွယ်သော သိက္ခာပုဒ်များစောင့်ထိန်းနေခြင်းသည်ပင် အကျင့်သီလအားဖြင့် မြင့်မြတ်နေမည်သာဖြစ်၏။ ထိုသားသမီးမျိုးကို […]
29-1-2021 နေလည်း (၂:၀၀)နာရီအချိန်က အမြန်လမ်းမိုင်တိုင်(၃၁၂)မှမထင်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးပြုခဲ့ရ တာချိလိတ်မြို့ဘက်ကနေပြီးလမ်းစရိတ်မရှိလို့လမ်းရှောင်လာတယ်လို့ပြောတယ်လမ်းတွေတဲ့ကားဆိုင်ကယ်တွေကိုအကူအညီတောင်တယ်ဘယ်သူမှမကူညီဘူးလို့ပြောပါတယ်။ တောင်တွင်ကြီးမြို့ဘက်ပြန်မည်ဟုပြောပါသည်ဖုန်းဆက်ပြီး.. အမြန်လမ်းပြင်စည်စခန်းမွူးကိုအကူအညီတောင်းပြီး။ ကိုယ်တက်နိုင်လေးတွေကိုအကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ crd အရှင် ဝိမလ ထီလာ unicode 29-1-2021 နလေညျး (၂:၀၀)နာရီအခြိနျက အမွနျလမျးမိုငျတိုငျ(၃၁၂)မှမထငျထားတဲ့ကုသိုလျလေးပွုခဲ့ရ တာခြိလိတျမွို့ဘကျကနပွေီးလမျးစရိတျမရှိလို့လမျးရှောငျလာတယျလို့ပွောတယျလမျးတှတေဲ့ကားဆိုငျကယျတှကေိုအကူအညီတောငျတယျဘယျသူမှမကူညီဘူးလို့ပွောပါတယျ တောငျတှငျကွီးမွို့ဘကျပွနျမညျဟုပွောပါသညျဖုနျးဆကျပွီ အမွနျလမျးပွငျစညျစခနျးမှူးကိုအကူအညီတောငျးပွီး။ ကိုယျတကျနိုငျလေးတှကေိုအကူညီပေးခဲ့ပါသညျ။ crd အရှင် ဝိမလ ထီလာ
ယနေ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဂေဟာမှာ သိန်း(၂၀)ဖိုးနီးပါး ကလေးတွေအတွက် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ ဒီကနေ့လေးမှာ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူဒါနတွေကို ပြုလုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကို အခိုင်အမာစိုက်ထူထားနိုင်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တစ်ယောက် တေးသီချင်းပေါင်းများစွာကို ထွက်ရှိအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့သူပါ။ သူမရဲ့ သီချင်းတွေဟာဆိုရင် လူငယ်ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားအောင်မြင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးသည့်အချိန်အထိ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူမကို ပရိသတ်တွေက စောင့်ကြည့်အားပေးနေကြတာပါ။ သမီးလေး Treasure လေးကို မွေးဖွားထားတာတောင် အလှမပျက်ပဲ တစ်သားမွေးတစ်သွေးလှနေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ကို မိန်းကလေးအချင်းချင်းကပါ အားကျရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း ရုပ်ရည်လေးက လှပသလို စိတ်ထားကလည်း ဖြူစင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ စန်ဒီမွင့ျလှငျက ဒီကနေ့မှာလညျး ခိုငျနှငျးဝေ ရငျသှေးလေးမြားဂဟောမှာ သှားရောကျအလှူပွုနခေဲ့ပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝေးက စန်ဒီမွင့ျလှငျလာရောကျလှူဒါနျးပွီး ကလေးတှကေို ခြီကာ ရိုကျကူးထားတဲ့ ပုံလေးတှကေို […]
ဒူဘိုင်းသို့ တတိယအခေါက်မြန်မာ့ဖရဲ တန်၂၀တင်ပို့နိုင်
ကာတာနိုင်ငံသို့လည်း တင်ပို့နိုင်ရန် လတ်တလော ညှိနှိုင်းနေ ဒူဘိုင်းသို့ တတိယအခေါက်မြန်မာ့ဖရဲ တန်၂၀တင်ကိုဇန်နဝါရီ၃၀ရက်က တင်ပို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ဇန်နဝါရီ၃၁ရက်ကဆက်သွယ်‌မေးမြန်းရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံ ဖရဲ၊ သခွားမွှေး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုင်ဝင်းကပြောသည်။ “ဒါကတတိယအခေါက်ပေါ့။မနေ့ကပို့လိုက်ပြီ။တန်၂၀ပါ။လတ်တလောဖရဲဈေးကွက်ကပုံမှန်ပါပဲ။အခု အမှာစာတွေကတော့ရှိတာပေါ့။ဒူဘိုင်းကထပ်မှာထားတယ်။ကာတာလည်းညှိနှိုင်းနေတယ်။အဓိကရေလမ်းကြောင်းကပို့တယ်ဆိုတာ လေယာဉ်လမ်းကြောင်းကဆို ဈေးကကြီးတယ်။ရှုံးသွားနိုင်တယ်”ဟု၎င်းကဆိုသည်။ အစေ့မဲ့ မြန်မာ့ဖရဲသီးများကို ပထမအကြိမ်အဖြစ်တန်ချိန်၂၅တန်ကိုဒူဘိုင်းသို့ ဒီဇင်ဘာ၁၃ရက်က ရေယာဉ်ဖြင့် တင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာဖရဲသီးများအားနှစ်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်သို့အားထားပို့ဆောင်နေရပြီး ယခင်နှစ်များက နယ်စပ်ဂိတ်များတွင်ကြန့်ကြာမှုနှင့်၀ယ်သူနည်းပါးမှုကြောင့် ဖရဲစိုက်ခင်းများအရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။ D-WAVE ######################## ကာတာနိုင်ငံသို့လည်း တင်ပို့နိုင်ရန် လတ်တလော ညှိနှိုင်းနေ ဒူဘိုင်းသို့ တတိယအခေါက်မြန်မာ့ဖရဲ တန်၂၀တင်ကိုဇန်နဝါရီ၃၀ရက်က တင်ပို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ဇန်နဝါရီ၃၁ရက်ကဆက်သွယ်‌မေးမြန်းရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံ ဖရဲ၊ သခွားမွှေး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုင်ဝင်းကပြောသည်။ “ဒါကတတိယအခေါက်ပေါ့။မနေ့ကပို့လိုက်ပြီ။တန်၂၀ပါ။လတ်တလောဖရဲဈေးကွက်ကပုံမှန်ပါပဲ။အခု အမှာစာတွေကတော့ရှိတာပေါ့။ဒူဘိုင်းကထပ်မှာထားတယ်။ကာတာလည်းညှိနှိုင်းနေတယ်။အဓိကရေလမ်းကြောင်းကပို့တယ်ဆိုတာ လေယာဉ်လမ်းကြောင်းကဆို ဈေးကကြီးတယ်။ရှုံးသွားနိုင်တယ်”ဟု၎င်းကဆိုသည်။ အစေ့မဲ့ မြန်မာ့ဖရဲသီးများကို ပထမအကြိမ်အဖြစ်တန်ချိန်၂၅တန်ကိုဒူဘိုင်းသို့ ဒီဇင်ဘာ၁၃ရက်က ရေယာဉ်ဖြင့် တင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာဖရဲသီးများအားနှစ်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်သို့အားထားပို့ဆောင်နေရပြီး ယခင်နှစ်များက နယ်စပ်ဂိတ်များတွင်ကြန့်ကြာမှုနှင့်ဝယ်သူနည်းပါးမှုကြောင့် […]
ဝန်ကြီး၊ ဒုသမ္မတ ဖြစ်ဖို့ မလိုဘူး ဆိုတဲ့ ချင်းပြည်နယ် မီးအိမ်ရှင် ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ မျှော်လင့်ချက်
ဝန်ကြီး၊ ဒုသမ္မတ ဖြစ်ဖို့ မလိုဘူး ဆိုတဲ့ ချင်းပြည်နယ် မီးအိမ်ရှင် ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ မျှော်လင့်ချက်.. ကျွန်တော့်ကို ဝန်ကြီးလုပ်ပါ ၊ ဒုသမ္မတ လုပ်ပါ ၊ စသဖြင့် ပြောကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွန်တော် ပြောချင်တာက ဝန်ကြီး ၊ သမ္မတ ဖြစ်ဖို့က ကျွန်တော့်အတွက် အဓိကမကျပါဘူး။ သမ္မတ ဆိုတဲ့ နာမည်ထက် အဖေနဲ့အမေပေးတဲ့ နာမည် “ဆာဆာ” ကို ပိုမြတ်နိုးပါတယ်။ ဝန်ကြီး တို့ သမ္မတ တို့ဆိုတာ အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အန်နယ်လ်ဒီအကြီးအကဲတွေ သေချာတိုင်ပင် ဆွေနွေးပြီး ရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်.. ဒါကို ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အားလုံး လက်ခံပေးရမယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀, ၅၀ […]
“လွှတ်တော် အစီအစဉ်များကို ကမ္ဘာ့မီဒီယာများကပါ သတင်းယူ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်”
“လွှတ်တော် အစီအစဉ်များကို ကမ္ဘာ့မီဒီယာများကပါ သတင်းယူ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်” တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ဖေဖော်ဝါ ရီလ (၁)ရက်မှာ ခေါ်ယူထားပြီး ပြည်သူ့ကိုယ်စား လှယ်များ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂)ရက်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကျမ်းသစ္စာကြိမ်ဆို ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ(၃)ရက်နေ့မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီး။ ဖေဖော်ဝါရီလ(၄)ရက်နေ့မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်ကျင်းပသွားပါမယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ(၅)ရက်မှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး သမ္မတ တင်မြှောက်ကြပါမယ်။ နိုင်ငံပိုင်သတင်း ချန်နယ်တွေကနေ မြန်မာပြည် တွင်း တင်သာမက ပြည်ပရုပ်သံ ချန်နယ်များမှလည်း လာရောက်သတင်းယူ တိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပြီး ကမ္ဘာကိုပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ လွှတ်တော် လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး ဧည့်သည်များအဖြစ် နိုင်ငံတကာ မှ သံအမတ်များလည်း တက်ရောက်ကြမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေပါတယ်။ #Dhana 🇲🇲❤️ ############## “လွှတ်တော် အစီအစဉ်များကို ကမ္ဘာ့မီဒီယာများကပါ သတင်းယူ […]